Mophie wuxuu soo saaray kiiska batteriga ee loogu talagalay Galaxy Note 9 | Androidsis
Mophie wuxuu soo saaray kiiska batteriga ee loogu talagalay Galaxy Note 9
Qolka Ignatius | | Batariga, Aaladaha Android, Samsung
Waqtiyadi ugu dambeeyay, maahan soosaarayaasha oo dhami inay sharad ku furayaan cabirka baytariyada laga bilaabo boosteejooyinkeeda. Inkastoo inta badan dhamaadka-dhamaadka Android, haddii ay ballaariyaan awoodda batterigooda, Apple waxay qaadataa dariiq ka soo horjeedda, iyadoo diiradda saareysa hagaajinta isticmaalka tamarta ee processor-keeda iyo dayactirka, ficil ahaan, isku awood.
El Samsung Galaxy Note 9 Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay bishii Ogosto ee la soo dhaafay, oo leh warar kala duwan oo ka dhigaya mid lagu talin karo in laga cusbooneysiiyo jiilkii hore. Xusuusin 9 wuxuu balaariyey awoodiisa batari ilaa 4.000 mAh, laga bilaabo 3.300 mAh oo ay bixiyeen jiilkii hore. Iyadoo 4.000 mAh aan haysanno batari ku filan maalintii oo dhan. Laakiin maalmaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn.
Maalmahaa marka aynu qaabkan aad u isticmaalno, soo saaraha Mophie ayaa hadda bilaabay a kiiska la batari isku dhafan taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan dib ugu cusbooneysiino aaladda qaab aad u raaxo badan oo fudud haddii aan isbarbar dhig ku sameyno bangiga dhaqameed. Haddii aan ka hadalno soo saarayaasha kiisaska batteriga, ama guud ahaan bangiyada awoodda, mid ka mid ah soo saarayaasha ugu fiican suuqa waa Mophie.
La Mophie Juice Pack, waa kiis leh batari isku dhafan 2.525 mAh, taas oo markii lagu daro terminalka, na siisa illaa 38 saacadood oo ismaamul ah. Intaa waxaa dheer, waxay na siineysaa difaac dheeri ah oo ku saabsan dhicitaanka suurtagalka ah iyada oo ay ugu wacan tahay geesaha gebi ahaanba ilaaliya terminaalka. Dhabarka kiiskan, sida dhammaan Mophie Juice Packs, waxaan ka helnaa taxane taxane ah oo ay la socdaan badhanka marka la cadaadiyo, na tusaya heerka batteriga kiiska.
Nidaamka lacag-bixinta ee kiiskani wuxuu la mid yahay kan isku xidha taleefanka, iyada oo la adeegsanayo soo-kicinta, markaa si loo dalaco, waa inaan ku dheji xeedho wireless ah . Qiimaha kiiskan waa 99,95 euro waxaana lagu heli karaa oo kaliya madow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Mophie wuxuu soo saaray kiiska batteriga ee loogu talagalay Galaxy Note 9
MIUI 10 hadda waxaa loo heli karaa in ka badan 30 taleefannada Xiaomi
Samsung taleefanka isku laaban ayaa hadda rasmi ah